Drug Actovegin nandritra ny fitondrana vohoka
Ny fanendrena ny zava-mahadomelina mandritra ny fitondrana ny zaza dia mahatonga ny reny hoavy ho mailo kokoa. Aorian'izany, araka ny fitsipika, manomboka ny fanandramana, ny hevitra, ny fiheverana fa misy zavatra tsy mety amin'ny voankazo, ary ny reny dia tsy voalaza. Ao anatin'ireo toe-javatra ireo, ary ny fanontaniana dia manontany ny antony maha-ara-drindrina azy ireo amin'ny Actovegin mandritra ny fitondrana vohoka. Diniho ny zava-mahadomelina, avelao ny fijoroana vavolombelona ho an'ilay fangatahana, lazao ny momba ny hetsika misy azy.
Inona no hampiseho ny akora Actovegin?
Ny fanafody dia mamporisika ny fampidiran-dra, mampitombo ny trofisma amin'ny tavy, mampitombo ny fihodinan'ny sela amin'ny oksizenina sy ny sakafo. Azo ampiasaina, ho an'ny tanjona horoahina sy ara-pihetseham-po. Manintona tsara ny famerenana indray ny sela manimba, mampitombo ny rà ao anatiny.
Amin'ny toe-javatra inona no ilazan'ny zava-mahadomelina mandritry ny fitondran'ny zaza?
Raha ny fitenenana manokana momba ny fampiasana Actovegin amin'ny endriky ny gidro nandritra ny fitondrana vohoka, dia tokony homarihina fa ny tanjon'ity fepetra ity, voalohany indrindra, dia ny hanatsarana ny rà mandriaka ao amin'ny rafitra "fetus-mother". Araka ny fantatra, ny fatiantoka io karazana io dia mahafaoka ny fivoaran'ny fahataran'ny fizotran'ny fampidiran-dra ny zaza ao am-bohoka, noho ny tsy ampy fanafody oksizenina, ny sakafo. Ny fanitsakitsahana mifandraika amin'ny tranga toy izany dia ny hypoxia, izay mety hitarika hatramin'ny fahafatesan'ny zaza ho avy.
Ankoatra ny safidy etsy ambony, dia azo omena ny tanjon'ny Actovegin amin'ny vehivavy bevohoka ny tanjona:
Manatsara ny rà mandriaka ao amin'ny atidohan'ny renim-pianakaviana iray, hamerina ny metabolismy;
miaraka amin'ny lalan-drà varikose ao amin'ny vehivavy bevohoka, mihalasa ny oise;
miaraka amin'ny famelarana ny lalan-dalan'ny rctum, amin'ny fitsaboana sarotra amin'ny hemorrhoid;
fisorohana ny fikoropahana.
Fetisy tamin'ny herinandron'ny faha 19 taonan'ny bevohoka
Ny haben'ny fahamatoran'ny placenta
Voarara ny vokatra mandritra ny fitondrana vohoka
Volan-tsarim-be ao amin'ny fitondrana vohoka
Tsy misy fiarovan-tena amin'ny foetus
Fetal TVP isan-kerinandro
Afaka mihinana strawberries ve ny vehivavy bevohoka?
Fandinihan'ny ultrasound amin'ny fitondrana vohoka
Bevohoka amin'ny kambana
Ny mahasoa amin'ny saka karoty amin'ny vatany sy ny fampiasany amin'ny cosmetology
Karoka ho an'ny nofinofy ara-paminaniana
Ahoana no hikarakarana vary orza amin'ny zaza?
Yoghurt in thermos - recipe
Shish kebab avy amin'ny salmon
Avatar baby: moa ve mahafatifaty sa maimaika?
Satin akanjo - akanjo mody ho an'ny tsara indrindra
Filtres ho an'ny fanadiovana rano amin'ny vy
Ahoana no ahafahana miditra amin'ny lalaon'ny IVF?
Mofomamy vita amin'ny ronono nototoina
Ahoana ny fomba hanintonana lehilahy ho azy?
Degou: fikarakarana sy votoatiny
Marika frantsay akanjo
Fampakaram-bady tsara tarehy - 52 sary avy amin'ny akanjo tsara indrindra ho an'ny tsirony
Cyclamen - famindrana
Naverin'ny Passer ho any Chris Hemsworth ny pasipaorony ary nahazo valisoa ho azy